Apple Inoburitsa Betas Nyowani dzewatchOS 5 uye tvOS 12 yeVagadziri Pasina Kuchinja Kwakanyanya Ndinobva mac
Apple inoburitsa mabheji matsva ewatchOS 5 uye tvOS 12 yevagadziri pasina shanduko dzakawandisa
Chaizvoizvo chakakosha chinhu mune idzi beta vhezheni dziri kuburitswa kugadzirisa mabugs uye zvinoita sekunge chichava shanduko huru mavari. Iyo itsva beta yakaburitswa neApple kune vanogadzira ese mavhezheni eOS, wedzera shanduko dzakatarisana nekusimba, chengetedzo, uye kuita kwese kugadzirisa.
Kunaka kwe Apple haisi kumira kuti isvike beta nhamba 8,9 kana 10, ivo havana basa sekureba sekukanganisa uye kutadza kwakawanikwa mavari kuchigadziriswa. Zvinonakidza kujekesa kuti huwandu hwebeta vhezheni hazvina basa, chinhu chakakosha ndechekuti kana iyo vhezheni yaburitswa kune vese vashandisi ine zvidiki zvinogoneka.
watchOS 5 uye tvOS 12 inoperekedza Mojave uye iOS 12
Iwo matsva beta beta akaburitswa pamwechete panguva yezuro masikati uye anowanikwa kune vanobvumidzwa vanogadzira uye kune avo vakanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta, kunze kweiyo betaOS beta yaunoziva iwe haingove pakati pevanhu betas. Chero zvazvingaitika, shanduro dze beta ndedze kuyedza uye kuyedza, saka tinogara tichifunga kuti zvirinani kuramba tiri pazviri pazvigadzirwa zvatinoda zuva nezuva, sezvo vachigona kuwedzera kusapindirana nechimwe chezvishandiso kana zvinoshandiswa. isu tinoshandisa, mukuwedzera kukundikana chero nguva pasina chikonzero chiri pachena. Ichokwadi kuti shanduro dzichangoburwa beta dzakagadzikana uye dzinoshanda nemazvo, asi zvirinani kusaisa panjodzi kukundikana kwechigadzirwa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple TV » Apple inoburitsa mabheji matsva ewatchOS 5 uye tvOS 12 yevagadziri pasina shanduko dzakawandisa
Bloomberg inoshuma tichaona Mac mini yemabasa gore rino
MacOS Mojave beta 8 yakaburitswa yevanogadzira uye yeruzhinji beta vashandisi